Instagram Oo Isbeddel Lagu Samaynayo Iyo Waxyaabaha Aad Xiisayso Ee Aad Waayi Doonto - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaInstagram Oo Isbeddel Lagu Samaynayo Iyo Waxyaabaha Aad Xiisayso Ee Aad Waayi Doonto
Instagram waxay qorsheyneysaa in ay qariso tirada dadka ka helay waxyaabaha la soo dhigo barta ee dalalka qaar, sida Australia iyo Japan, si ay “meesha uga saarto cadaadiska” ay dareemayaan dadka isticmaala.
Hadda, dadka isticmaala barta Instagram waxay arkaan dhammaan tirada jamashada ee fariin kasta. Tijaabadan, dadka waxay arki doonaan cinwaanada iyo farriimaha ka hooseeya.
Dadka soo dhiga sawirrada iyo muuqaallada oo keli ah ayaa arki kara tirada dadka ka hela.
Waxaa jiro walwal laga qabo in baraha bulshada ay qeyb ka noqdaan kalsooni yaraanta iyo in ay dareemi waayaan dhallinyarada isku filnaan.
Instagram ayaa tijaabo noocan ah ka sameysay dalka Canada, bishii May, haddana waxay ka billaabeysaa Australia, New Zealand, Ireland, Taliyaaniga, Japan iyo Brazil, sida ay shirkadda u sheegtay BBC.
“Waxaan rajeyneynaa in tijaabadan ay meesha ka saarto culeyska ah in qofka uu ka walwalo tirada jamasho ee uu u heli karo waxyaabaha uu soo dhigo, taasna waxay fududeyneysaa in qofkasta oo soo daabaci karo wixii uu jecel yahay,” sida ay sheegtay Mia Garlick, oo ah madaxa Facebook ee Australia iyo New Zealand.
Waxay intaa ku dartay in ujeedadu tahay in dadka isticmaala barta ay dareemaan in culeys uusan saarnayn ayna eegaan “haddii uu isbedelkan yahay mid ka caawinaya in ay diiradda saaraan soo gudbinta sheekooyiinkooda gaarka ah”.
Instagram waxay sheegtay in tijaabada aysan saameyn doonin qaabka ay shirkadaha ganacsiga ku ogaadaan tirada dadka ay farriimahooda gaareen.
Sidoo kale dadka isticmaala bartan waxay tirada Like-ta ku ogaan karaan in ay gujiyaan sawirka ama muuqaalka.
Markii barnaamijkan laga billaabay Canada, madaxa Instagram, Adam Mosseri wuxuu sheegay in ujeedada ay tahay in la yareeyo walwalka iyo dadka ku tartamaya tirada like-ta ay ka helayaan waxyaabaha ay soo dhigaan.
“Waxaan dooneynaa in dadka ay iska yareeyaan tirada like-ta ee ay helayaan, ayna waqtigooda ku bixiyaan sidii ay u heli lahaayeen asxaab badan”.
Tirada dadka ka hela farriintaada waxay ka dhigan tahay guusha iyo caannimada Instagram-kaaga.
Cilmi baarisyo horey loo sameeyay ayaa lagu sheegay in heerka ay farriinta gaarto ay badiso kalsoonida qofka, sidoo kalena ay dhaawacdo kuwa aan sawiradooda la saarin like badan.
Baaritaanno horey loo sameeyay ayaa baraha bulshada lagula xiriiriyay xannuunada dhirmirka ee sida gaarka ah u saameeya dhallinyarada.
KENYA: Wasiirka Maaliyadda Oo Xabsiga Loo Taxaabay